भगवानलाइ पनि नागरिकता हुन आवश्यक छ र ? – ABC KHABAR
भगवानलाइ पनि नागरिकता हुन आवश्यक छ र ?
May 18, 2016 May 18, 2016 ABC Khabar बिचार
समाजमा चेतना संवाहक रुपमा मानिएको प्रेस जगत आज दिनानु दिन कमजोर बनाईदैछ । समाजमा भए गरेका भ्रम र यसको वास्तविकता जान्न पाउने अधिकार सबैको हुन्छ । आत्म स्वीकार्य विषयलाई अपनाउने अधिकारपनि उनीहरुलाई हुनु स्वाभाविक नै छ । यद्यपी भ्रमको खेति गरेर आत्मरति मानव इतिहाँसलाई अति रन्जित बनाइने र त्यसलाई बाध्य बनाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेहरु जो समाजमा नालायक सावित हुन्छन् उनीहरुको पक्ष पोषण कुनै लेखक तथा पत्रकार गर्दैनन् । समाजको ऐनाको रुपमा अभिएको प्रस जगतमा लागेकाहरुको सामाजिक दायित्वपनि यही नै हुन आउँछ । जसले अघि या पछि त्यसको सहि परिणाम देखाउँछ ।
हामीले जानेको बुभmेको हरेक वस्तुहरु चेतनाशिल छन् जब मानिसहरुको बिचमा भ्रमपूर्ण अभौतिक तर्कहरुले एउटा बृहत्तर मानवीय मस्तिष्कमा विकल्पका कथाहरु सुनाइन्छ र कुनै चटकी देखाएर अलमलाइन्छ । त्यहीबाट यर्थातको धरातल नबुझे सम्म मानिसको आस्था विश्वासको जन्म गराईन्छ । त्यो आस्था, विश्वास पनि सत्य र लौकिक आधारमा गर्ने गरिन्छ । यीनै कुरालाई उजागर गरेर सन्देश दिने काम प्रेस जगतको हो । भ्रमको सिर्जना गर्नेहरुको लागि जहिल्यै प्रेस जगत विपक्ष नै हुने गर्दछ र जबसम्म यहाँ उठाउन खोजिएको सन्दर्भ पत्रकार तथा खोजकर्ता भद्रगोल किराती (मनोज कुमार राई ) को प्रहरी गिरफतार र हाल हिरासतमा राखिएको प्रसंगमा हो ।
उनले केही समय अगाडी एउटा पुस्तिका प्रकाशन गरे । जसमा भनिएका ‘गड एन्जल’को बारेमा लेखिएको थियो । गड एन्जल उर्फ भक्तकुमार राई (भकुरा) जस्ले जानेर नजानेर धेरै ठाउ भकुराई खाएका छन् । उनलाई यो पुिस्तकामा पनि राम्रै भकुरेका छन् भद्रगोल ले । उनका आनी वानी, नानी हुँदा देखि जवानी आउदा सम्मको कुरा खोतल्न प्रयास गरिएको पुस्तकमा खोजपूर्ण व्यवहारिक र यर्थात विवरणहरु पेश गरेर लेखिएको प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्नेहरुले भनेका छन् । त्यो पुस्तकमा जहा गड एन्जलको नाममा सिर्जना गरिएका विभिन्न भ्रमहरुको पर्दाफास गरिने काम भएको छ
पछिल्लो समयमा आएको प्रविधिको विकासलाई प्रयोग गरेर फोटोसप मार्फत चित्रहरु बनाएर कमाएको सस्तो लोकप्रियताको बढी चर्चा परिचर्चा गरिएको छ । भने आफुलाई इस्वरीय दुत भन्दै सर्वशक्तीवाला भएको भ्रम छर्न जादुगरी, तथा मिश्रित धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन र धेरै ठाउँमा आफ्नै कारणले भोगेका शारिरिक मानसिक यातना जस्ता घटनाहरुले आक्रान्त भएका उनका बारेमा थोरै भने सत्य तथ्य कुरा पुस्तक मार्फत आएका छन् ।
हुन त आस्था सबैमा हुन्छ । आस्थाहरु सबै ऐतिहासिक घटना क्रमसंग जोडिएर आएको हुन्छन् । अझ धार्मिक आस्था प्रष्ट रुपमा ऐतिहासिक घटनाक्रम संग जोडिएर आउने गर्दछ । इतिहासमा कोही कुनै धर्म भीरुहरुले ती आफ्ना घट्ना क्रमलाई अझ बढी प्रभाकारी बनाउन प्रयत्न स्वरुप अलौकिक व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । जसलाई शैलीवद्ध र लिपीवद्ध गर्दै जाँदा त्यसले ग्रन्थहरुको रुप ग्रहण गरेको छ । संसार दिनका दिन परिवर्तनशिल छ । यहि परिवर्तनशिल समाजमा आफुलाई टिकाई राख्न यी विभिन्न प्रोपोगान्डा मच्याउन भकुराहरुलाई नै बढी आउने गर्दछन् । जसलाई विज्ञानको चुनौति जानकारी नै छैन । विज्ञानसंग डराउछन ।
धार्मिक विश्लेषणमा सबै धर्मको आ–आफ्नै तर्क वितर्कहरु रहेका छन । सबैले स्वर्गले र नर्कको परिकल्पना पनि गरेकै हुन्छन् । हाल सम्म यतिका धर्मवालाहरुले भनेको स्वर्ग कोही पुगेर फर्केको भने सुनिएको छैन । नपुगेकै देखिएको छ । न नर्कमा जाकीएकै भेटिएको छ । तर आफुलाई स्वर्गको व्याष्खाता सम्झने र स्वर्ग नै पुगेर आए भन्नेहरु ले आफुलाई चाही स्वर्गीय आनन्दमा लिप्त बनाएको धेरै उदारहणहरु छन् ।
यसो भनि रहँदा कुनै पनि धर्मको विरोध गरिरहेका छैन । अगाडी पनि उल्लेख गरिएको छ धर्मको विकास ऐतिहासिक घटनाक्रम संग जोडिएको हुन्छ । जसलाई विज्ञानले पुष्टी गर्ने सक्तैन तर इतिहासले केही न केही छेउमा उभिन बाध्य बनाउछ । कि एउटा समाज निर्माण हुन निकै लामो समय कुर्नै पर्दछ । त्यस्तै एउटा सम्प्रदायका विकास हुन पनि त्यति नै समय लाग्छ यसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, परम्परागत, मुल्य मान्यताहरु स्थापीत भएका हुन्छन । निश्चित सिमा तथा परिधिहरु तोकिएका हुन्छन् । जस्ले अनुशासनको घेरामा बसेर राम्रै जमातको विकास समेत गर्दछ । सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुको विकास गर्दै महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुलाई समेत प्रत्साहान गर्दछ ।
तर भकुराहरुले गरेको धार्मिक तर्क तथा प्रचारमा न दर्शनको कुनै अंश न कुनै सार छ । यहा उठेका प्रसंगलाई हेर्दा धर्म व्यक्तिको प्रचार र स्वार्थको भन्दा माथि देखिदैन । जहा सम्म गडएन्जलको कुरा नभएर उदयपुरको मैना मैनी वारिपारी जहा उनि जन्मेको ठाउमा चिनिएको भक्ते एउटा सामाजिक आवारा केटा हो भनेर चिन्नेहरु धेरै छन् । सायद भक्तलाई जस्ले चिने उनिहरुले भक्तकुमारको बाल्यकाल राम्रैगरी सुनाउन सक्छन । जसरी गड एन्जल जन्मदै माङ लिएर आए नागले सर्पले बेरिएर जन्मेको । उनि जन्मदा घरको पुरै उज्यालो भएको । माङ नजिकै ढोल झ्याम्टा बजाएको जस्ता प्रचार छन । त्यो उनको छिमेकमा गएर बुझ्दा हुन्छ अझै पनि उनी जन्मेको गाउमा जान्ने सुन्नेहरु जीवितै छन ।
उसो त उन्ले कहा पढे कति पढे र पढदा के के पढे यो विषयको जानकारहरु त्यहि वरिपरि बगे्रल्ती छन । उनलाई पनि थाहा छ भक्तकुमारको गाउँमा ‘गडएन्जल’ हुन सक्दैन । त्यसैले उनि कुनै अभेग ठाउँमा भगवान भएर वस्छन् । एक समय यस्तो पनि आयो जुन बेला पत्रिका बोक्ने काम देखी लिएर चर्चहरुमा भक्तकुमार थियो गाउमा राम्रो छोरी चेली देख्ने नहुने देखी लिएर आफै उडेर देखाइ दिन्छु भन्ने सम्मको अह्म पालेको पनि उनैले थिए । कालिम्पोङ चर्च देखि इलामको लारुम्बा पुगेर दिक्षा लिन पुर्व कहाँ कहाँ थिए गडएन्जल ? उनि आफैले कहिल्यै बताएको सुनिएको छैन । जन्मेको कति बर्ष कहाँ कहाँ पुगेर उनि गडएन्जल भए ? गड एन्जल बन्नुपूर्व यति त्रीकाल दर्शि कता थिए ? उनका अनुयायीहरुलाई यसका बारेमा केही भनेका होलान त ? यदि उनले भनेका छन भने त्यो बेला देख्ने जान्ने बझ्ने बुवा आमा दाजु दिदिहरु त अवश्य पनि होलान नी ! के उनको कुरा गराई त्यो बेला विषय मिल्ला ? यदि मिल्यो भने हामी सहन्छौ खोज्दैनौ चासो गर्दैनौ तर मिलेन भने हामी चुपलागेर पनि हुन्छ होलार ?
यसका प्रशस्त उदाहरणहरु देखाउनका लागी प्रविधिको विकास भएकै छ । सेतो पहिरनमा कालो काम किन हुन्छ ? प्रश्न स्वभावीक रुपमा उठ्ने गर्दछ र उठ्छन । उठाउन पनि पर्दछ । कुलरक्षा र वंश संरक्षण गर्ने अभियानमा लागेका आम किरातीहरुले वंश विनासकालागि कुल विसर्जन गर्न स्व.घोषीत भगवान मान्नु नै पर्छ भन्ने लाग्दैन । किराती प्रकृती पुजक हुन जसले जल, जंगल र जमिनलाई सधै पुजेर आएको छ । उस्ले प्रकृतीलाई पुज्छ । पितृलाई सम्मान गर्छ मरे पछि न स्वर्गको परिकल्पना गर्छ न नर्कको चिन्ता गर्छ । स्वभाविक हिसाबले मृत्युलाई प्रकृतिको नियम हो भन्ने स्वीकार गर्छ । यो किरात समुदाय संग भएको गुण हो ।
संस्कारका हिसाबले प्रकृतिबाट प्रकृतिसम्मको यात्रा गर्ने किरात समुदाय धर्म, मुन्धुम धर्म हो त्यसलाई सजिलै बहकावमा ल्याउन सकिने अनुमान साथ हुने गरेको अतिक्रमणहरुको लिस्टमा चर्काेरुपमा उदाएका एउटा भ्रमका रुपमा भक्तकुमारको बारेमा खोज अनुसन्धान हुन अपराध हुन सक्तैन भन्ने मेरो विचार हो । यत्रा क्रियाकलापमा राज्यको समर्थन हो की विरोध ? त्यो तथ्यगत रुपमा केलाउन पर्दछ । पहिल्लो पटक भद्रगोल किरातीले सार्वजानिक पुस्तकलाई आधार मान्दा उनी सँग दुईवटा नागरिकता र पासपोर्ट भएको उल्लेख छ । यो छानविन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । भगवानको नाममा जारी गरिने नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी के ती भगवान भन्दा कम होलान ? भगवान अलौकिक हुन्छ उस्को नागरिकता हुन आवश्यक छन् कि छैन । उनी नागरिक हुन भने नागरिककै हैसियतमा किन नवस्ते ? राज्यले नागरिक माथी गर्ने व्यवहार गर्ने तर उस्ले गर्ने हरेक क्रियाकलापको वैधानिकता किन नखोज्ने त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको पाटो सुरु भएको छ ।
अवको विषय भद्रगोलले विषय उठाएका छन् । अब लेख्ने लेखिने तथा सत्य तथ्य उजागर हुने क्रम भावी समयले क्रमश ल्याउदै जाला भन्ने देखिको छ । भद्रगोल जी ले विरालोको घाँटी घन्टी बाँध्नु भएकै हो अव सबैले विरालो चिनेका छ ।
तर यस्तो बेला किरातीहरुको धर्म संस्कार र संस्कृतिको पक्षमा आफुलाई स्थापित बनाएको भन्ने र सम्पुर्ण किरात राईहरुको छाता संगठन भएको आफुलाई दावि गर्ने किरात राइ यायोक्खाले केही पहल लिन नसक्नु दुखद रहेको छ । कि भक्तबहादुरहरु यायोक्खामा पनि उतिकै छाएका छन् ? कुलरक्षा, संस्कृति रक्षा, धर्म र परम्पराहरुको रक्षाको नाममा साकेलामात्र नाचेर हुन्छ र ? एक अभियान्तालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । यति खेर विरोधको स्वरहरु छताछुल्लै हुनुपर्ने होइन र ? कि सुतेका छन् किरातीहरु ?
जापानको उपनिवेश थियो कोरिया उहिले
One thought on “भगवानलाइ पनि नागरिकता हुन आवश्यक छ र ?”
रकम चाम्लिङ ( Rakam Chamling ) says:
सामयिक आलेखको लागि भिम राई भाईलाई धन्यवाद !
जतिखेर हामी राजनितिक रुपमै पहिचानको लडाई लडिरहेका छौं र सुधारको नाममा भक्ते भाइ र उनिद्वारा प्रतिपादित हेभन्लिपथ र लभिज्मले हाम्रो मौलिक सस्कृतिमाथी निर्मम प्रहार गरिरहेको छ । सस्थागतरुपमा हाम्रा पहिचानी अबयबहरुकै रखवारी गर्नु पर्ने “किरात राई यायोक्खा” जस्ता सस्थाहरुले मौनता साध्नुलाई शुभ संकेत मान्न सकिन्न ।
औंला ठड्याउने मौका नदिओस यायोक्खाले !